Kris တေလာ၏ "Porn နှင့် Erectile Dysfunction အကြောင်းအနည်းငယ်ခက်ခဲသောအမှန်တရားများ" - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
"Porn အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ခက်အမှန်တရားနှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်" Kris တေလာရဲ့ Debunking
ကျွန်မအံ့သြသွားတယ်နှင့်အတန်ငယ် grad ကျောင်းသား Kris တေလာရဲ့အားဖြင့်တျရှုပျထှေး မကြာသေးမီ Vice ဆောင်းပါး porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ပေါ်မှာ။ မိမိအဆောင်းပါးမှာတော့တေလာတစ်ခုသာများ၏ content အတုမဟုတ် ငါ 2016 အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်အတူပူးတွဲရေးသားခဲ့ပါတယ်စာပေ၏7ပြန်လည်သုံးသပ်သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့နိမ့်လိင်စိတ်နိုးထဖို့ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါ Kris တေလာရဲ့ဆောင်းပါး၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍများဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီကဒီမှာသူပေးထားခဲ့လေ့လာမှုများနှင့်ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည်သေးကသူ၏ဆောင်းပါး၌လျစ်လျူရှုဖို့ရွေးချယ်:
လိင်မှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်လိင်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှု ၄၀ ကျော်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်။
150 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်ကိုးကားဆောင်းပါးများ, အင်တာဗျူးများနှင့်ဗီဒီယိုများကို အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
60 လေ့လာမှုများကျော် ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလေ့အကျင့်များနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသောတွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံခြင်း။
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအပေါ်ထုတ်ဝေအားလုံးသည်အာရုံကြောလေ့လာမှုများ: 55 မှ neuroscience လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neurospychological, ဟော်မုန်း) သည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
31 စာပေ & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်ညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားရမည်။
porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3,000 ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုံပြင်များ (အကောင့်ပြန်ဖွင့် 1, အကောင့်ပြန်ဖွင့် 2, အကောင့်ပြန်ဖွင့် 3, က Short PIED ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ).
ဒီအပိုင်းအစ၏ကျန် YBOP မှတ်ချက်များအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် Kris တေလာရဲ့ဆောင်းပါးကနေကောက်နှုတ်ချက်နှင့်မှကောက်နှုတ်ချက်ထားရှိရေးဦးမည် ငါ 2016 အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်အတူပူးတွဲရေးသားခဲ့ပါတယ်စာပေ၏7ပြန်လည်သုံးသပ်.
Kris တေလာ: “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်ချိတ်ထားခြင်း - ပျက်စီးသွားသောဆူနာမီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ” အဆိုပါသံတော်ဆင့်သတိပေးခဲ့သည် မနှစ်က။ သူတို့ကဘရစ္စဘိန်းအခြေစိုက်လိင်ပညာရှင် Liz Walker ကိုကိုးကားပြီး“အင်တာနက်သည်ထင်ရှားမှီ, 40 အောက်မှာယောက်ျားအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုယခုကြောင့်ကိန်းဂဏန်းရာခိုင်နှုန်း2နှင့်5အကြားမှခုန်ချခဲ့ကြောင်းရာခိုင်နှုန်း 27-33 အကြောင်းကိုအဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့သည်။"
Liz Walker ကကပေးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတိကျမှန်ကန်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤ Lay ဆောင်းပါး (များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်သုတေသနနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်အတည်ပြု) နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါဝငျသောစာပေ၏ဤကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှုအတွက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)။ ။ ရှစ်စာရေးဆရာများအနက်အောက်ပါကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူခုနစျပါးဆေးသမားခဲ့ကြသည်: - San Diego မှနှစ်ခုဆီးရောဂါပါရဂူတစ်ဦးအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်နှစ်ဦးစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်အထွေထွေဆေးကုသမှုဆိုင်ရာဆရာဝန် "တစ်ခုမှာစာရေးဆရာဒေါက်တာ Klam, ရေတပ် Medical Center မှစိတ်ကျန်းမာရေး၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားခုနစ်ခုဆရာဝန်များ (အဓိကအားဖြင့်) လူပျိုတို့ကုသ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုအများကြီးကုန်ရပြီ။
Kris တေလာ: ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်သူမကသူမကိုးကားခဲ့တဲ့သုတေသနကိုသင်ကြိုးစားတဲ့အခါ၊ သူမ၏အရင်းအမြစ်ဤ စက္ကူ, အလှည့်အတွက်ရင်းမြစ်ထားတဲ့ဂဏန်းပေးသော နှစ် စာတမ်းများ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုအကြောင်းတရားဟုမရည်ညွှန်းပါ။ စက္ကူ၏ဒုတိယစာရေးဆရာကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမ ဂယ်ရီ Wilson က, လူသိများသောထက်ထက်သန်သန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားသူ။
တေလာပြောင်ပြောင်တင်းတင်း (ဖြစ်ကောင်းအဘယ်သူမျှမမည်ဟုမျှော်လင့်သည်၎င်း၏အကြောင်းအရာရှေ့နောက်မရန်အမေရိကန်ရေတပ်စက္ကူနှင့်ရရှိသောကိုးကား link ကို click နှိပ်ပြီး) ။ တေလာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူကိုးကားကြောင်း "အကြံပြု" သာ2အောက်မှာလူ ED နှုန်းထားများ streaming များပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ (40) ၏ထွန်းကားကတည်းကတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်သောပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံ 2006 အထီးကျန်လေ့လာမှုများ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ကျနော်တို့တိုင်းလေ့လာ PubMed ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုယခင်က 40 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းထောက်ပံ့ပေးကြောင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ငါတို့သည်လည်းကျော်နှင့် 40 အောက်မှာနှစ်ဦးစလုံးလူ ED နှုန်းထားများဆန်းစစ်အားလုံး PubMed ရင်းမြစ်ထားတဲ့ Meta-လေ့လာမှုများနှင့် Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ Meta-analysis သည်အထူးသဖြင့်ဘာသာရပ်ပေါ်မှာရှိသမျှယခင်လေ့လာမှုများသုံးသပ်ပြီးကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဆိုင်တဲ့ data တွေကိုစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ (တေလာသေးတစ် Meta-analysis သည်အဖြစ်ကဘာလဲဆိုတာမသိစေခြင်းငှါ သူ Meta-analysis သည်တဦးနှင့်ဆက်စပ် ကျွန်တော်ကိုးကား။ )
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတမ်း2တှငျအဘယျကိုးကားခဲ့ပါnd လူတို့သညျအဘို့အသမိုင်းဆိုင်ရာ ED နှုန်းထားများအောက်မှာ 2-5% အကြားခဲ့ရဘူးသောပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံအပိုဒ်? (အောက်ပါကိုးကားနံပါတ်များနှင့်၎င်းတို့၏မူရင်းလင့်ခ်ပေးထားပါသည်။ )
 - ကမ္ဘာအနှံ့ကနေ 2000 လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ကြောင်း (93) တွင် Meta-analysis သည်။
 - (1992) အကြီးဆုံးမြို့အမေရိကန်စစ်တမ်း။
 - (၂၀၀၁) ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ (၂၉) နိုင်ငံမှ ED နှုန်းထားများ။
ကိုးကားမဟုတ်: အဆိုပါ Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့သူတို့အား 1-30 အတွက် 3% ထက်လျော့နည်း 30 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ယောက်ျားအတွက် 45% ထက်လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။
တေလာ 40 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED နှုန်းထားများတသမတ်တည်း 2-5% အကြားအဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့ကြသောငါတို့ပြောဆိုချက်ကိုချေပဖို့တစ်ခုတည်းလေ့လာမှုများကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစားသူကလူပျိုတို့အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းကအမြဲတမ်းပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်, တစ်ခုတည်း 2013 လေ့လာမှုနှင့်အတူစာဖတ်သူကိုလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သို့သော်စက္ကူသည်လည်းငါတို့တောင်းဆိုမှုများထောက်ခံပါတယ်။ ဟုသူကဆိုသည်:
Kris တေလာ: အချို့သောခန့်မှန်းချက်များအရ erectile 'disfunction' သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည် လူအပေါင်းတို့၏ထက်ဝက်နှင့် 1 erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံ4ယောက်ျားအတွက် အသက် ၄၀ အောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်စာတမ်း၏စာရေးသူများသည် Erectile dysfunction အတွက်ဆရာဝန်များထံလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည့်အမျိုးသား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်အသက် ၄၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရ။ အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ အသစ်စက်စက်ရောဂါ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလေးထဲကတစျခုမှာလူနာအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကနေလူငယ်က Man-စိုးရိမ်ဖွယ်ရုပ်ပုံ Is. (အဆိုပါလေ့လာမှုအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ပညာရေးနှုန်းထားများအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့ပါဘူး။ )
နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတမ်း3တှငျအဘယျကိုးကားခဲ့ပါrd မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ 40 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများစွာမြင့်မားတဲ့နှုန်းထားသတင်းပို့သောပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံအပိုဒ်?
 - (2013) ။ အထက်ပါလေ့လာမှု။ ပြင်းထန်သော ED နှုန်းသည်လူ ၄၀ ကျော်အမျိုးသားများထက် ၁၀% နီးပါးပိုမိုမြင့်မားသည်။
 - (2015) ။ ဥရောပသားများ၊ ၁၈-၄၀၊ ED နှုန်းသည် ၁၄% မှ ၂၈% အထိရှိသည်။ အနိမ့်လိင်စိတ် 18% အထိမြင့်မားသည်။
 - (2012) ။ 30-18 အသက်ဆွစ်ဇာလန်ယောက်ျား၏ cross-section မှာ 24% ၏ ED နှုန်းထားများ။
 - (2014) ။ 16-21 အသက်အထီး: ED (27%), အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (24%), အော်ဂဇင် (11%) နှင့်အတူပြဿနာများကို။
 - (2016) ။ သူတို့က2နှစ်တာကာလအတွင်းအများအပြားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကျော်တွေ့ရှိခဲ့ရသော2နှစ် longitudinal လေ့လာမှု, 16-21 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး၏အောက်ပါရာခိုင်နှုန်း: အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (47.9%), အနိမ့်အလိုဆန္ဒ (46.2%), erectile function ကိုအတွက်ပြဿနာများ ( 45.3%) ။
 - (2014) ။ တက်ကြွတာဝန်စစ်မှုထမ်းအတွက်ပညာရေး၏နယူး diagnoses နှုန်းထားများထက်ပိုမို 2004 နှင့် 2013 အကြားနှစ်ဆခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
 - (2014) ။ 21-40 အသက်တက်ကြွတာဝန်အထီးစစ်ရေး်ထမ်းများ၏ cross-section လေ့လာမှု 33.2% တစ်ခုခြုံငုံ ED နှုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
 - (2010) ။ ယောက်ျား 18-40 ၏ဘရာဇီးလေ့လာမှု% 35 ၏ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြ.
အဆိုပါ takeaway: နုပျို ED ၏သမိုင်းဝင်နှုန်းထားများ 1-5 ရာခိုင်နှုန်းကနေအရွယ်ရှိနှင့် 2010 ကတည်းကလေ့လာမှုများ ED နှုန်းထားများအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးဟာသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေကထောက်ခံနေပါတယ်အစီရင်ခံတင်ပြကြပြီသောတောင်းဆိုမှုများ။ အားလုံးအထက်ပါအထောက်အထားများကို (နှင့်ပိုပြီး) ကိုအမေရိကန်ရေတပ်စက္ကူကိုပထမဦးဆုံး3အပိုဒ်များတွင်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤအချက်ကို Kris တေလာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလမ်းလွဲကွောငျးဖျောပွသ Vice နှင့်၎င်း၏စာဖတ်သူများ။
40 လေ့လာမှုများကျော် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်အန problems တရာယ်ပြန့်နှံ့စေရန် porn အသုံးပြုခြင်း၊
Kris တေလာ: “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာကိုထောက်ခံတဲ့သုတေသနကိုအချည်းနှီးရှာဖွေနေတုန်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေထဲမှာအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအပြင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာရေးအချက်များပါဝင်သည်။ စက်ဘီးစီးတာရှည်လွန်းတာတောင်မှစက်ဘီးထိုင်ခုံက perineum မှာအာရုံကြောတွေကိုညှစ်မယ်ဆိုရင်ယာယီ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ”
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည် Kris တေလာအား“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေသောအနေအထားကိုထောက်ခံသည့်သုတေသနအတွက်အချည်းနှီးရှာဖွေခြင်း” ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးမည်။ ဤပြောဆိုချက်ကိုတေလာအစောပိုင်းကပေးခဲ့သည့်အတိုင်းမျိုချရန်ခက်ခဲသည် ဒီ YBOP စာမျက်နှာ Liz Walker ကသည်။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အောက်ပိုင်း arousal မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ causation သရုပ်ပြ, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ် (အမှုအစီရင်ခံစာများပါဝင်သည်သောသုံးဖြစ်ခြင်းကိုအမေရိကန်ရေတပ်စက္ကူ၏တဦးတည်း). ဒီလေ့လာမှုတွေ၏တဆယ်ခြောက်အဆိုပါ 2016 အမေရိကန်ရေတပ်စက္ကူစကို လုပ်. , သူတို့ကဒီအပိုဒ်နှင့်အတူမိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်:
ထိုကဲ့သို့သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှုများအရှိဆုံး illuminating ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, စာပေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် [arousal, ဆွဲငင်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီလေ့လာမှုအတော်များများတွေ့27, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43] အခက်အခဲ orgasming, လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကိုအပါအဝင် [27, 30, 31, 35, 43, 44] ပူးပေါင်းလိင်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ , [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီး၏ခံစားလျော့နည်းသွား37, 41, 45] လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု [38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47] တနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံကျော် arousal အောင်မြင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးများအတွက်ဦးစားပေး  နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်များအတွက်လျော့နည်းဆန္ဒသတင်းပို့ရှိသူများအတွက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်ကို Activation .
အမေရိကန်ရေတပ်စက္ကူသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးနောက်အောက်ပါအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချလေ့လာမှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်: အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, 2016 ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia တီထွင်သောသူသည် 35 ယောက်ျား porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်ပြန်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်စက္ကူလိုပဲ, ကများလွန်း causation သရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု 19 ယောက်ျားရေးသားသူစက္ကူတက်ရေးသားခဲ့သည်အချိန်မှာသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုကြုံတွေ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စာရေးသူဟာလက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဦးပြင်သစ်စိတ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ သူက ", အားကြီးသော Anti-ညစ်ညမ်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်" ခဲတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်သေးသူအကဲဖြတ်လူတို့သညျအများတို့သည်လည်းညစ်ညမ်းစွဲခဲ့မှတ်ချက်ချသည်။
နိဂုံး: မကြာခဏဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းအပေါ်တစ်ဦးမှီခိုအားဖြင့်လိုက်ပါသွားစွဲလမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ် coital anejaculation အချို့အမျိုးအစားများ၏ etiology အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှမြင်ကြပြီ။
အဆိုပါ takeaway: Kris တေလာနှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အောက်ပိုင်း arousal မှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများပေးထားခဲ့သည် 80 လေ့လာမှုများကျော် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချဖို့ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်သွယ်ထားသော။ နောက်တကြိမ်, တေလာတမင်တကာလှည့်ဖြား Vice နှင့်၎င်း၏စာဖတ်သူများ။
% သို့မဟုတ်ဒါနောက်ဆုံး 500 နှစ်များတွင်ငယ်ရွယ်နုပျို ED တိုးပွါးတစ်ဦးက 10 ပုံမှန်အတိုင်းအချက်များဖြင့်မျောသွားရှင်းပြလို့မရဘူး
Kris တေလာနုပျို ED အတွက်မကြာသေးမီကြီးမားတဲ့မြင့်တက်များသောအားဖြင့် 40 ကျော်အမျိုးသားများတွင် ED ဆက်နွယ်နေကြောင်းဟာ variable တွေကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရမညျဟုဆိုပါတယ်။
Kris တေလာ: ညစ်ညမ်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအနေအထားကိုထောက်ခံကြောင်းသုတေသနများအတွက်အချည်းနှီးရှာဖွေနေတုန်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများအမျိုးမျိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသူတို့တွင်သည်မဟုတ်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ကွော, အချို့ဆေးဝါးများတာ, ဆေးလိပ်သောက်, အရက်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပါဝင်သည်အဖြစ်ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာရေးအချက်များ။ ဆိုင်ကယ်ထိုင်ခုံပုပျဉ်အတွက်အာရုံကြောချုံ့လျှင်တောင်မှရှည်လျားလွန်းများအတွက်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းယာယီ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူရှင်းပြသကဲ့သို့, ဆေးလိပ်သောက်, ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါ ခဲ 40 (ကိုးကား 16) အရအမျိုးသားများတွင် ED ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနာတာရှည် ED ဖြစ်ပွားစေရန်လုံလောက်သောပြင်းထန် neuro-သွေးကြောပျက်စီးမှုကိုထင်ရှားစွာပြမှဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်ထိန်းအကွပ်မဲ့ဆီးချိုရောဂါ၏နှစ်ပေါင်းကြာပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူမှ:
အစဉ်အလာ, ED [အနေနဲ့အသက်အရွယ်-မှီခိုပြဿနာအဖြစ်ရှုမြင်ထားသည်2] နှင့် 40 အောက်မှာလူ ED အန္တရာယ်အချက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများမကြာခဏလေ့ထိုကဲ့သို့သောဆေးလိပ်သောက်, အရက်, အဝလွန်ခြင်း, အထိုင်များအသက်, ဆီးချို, သွေးတိုး, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, နှင့် hyperlipidemia အဖြစ်အသက်ကြီးအတွက် ED နှင့်ဆက်စပ်အချက်များဖော်ထုတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြ .
"အတှကျအဖြစ်အချို့သောဆေးဝါးများတာ, ဆေးလိပ်သောက်, အရက်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု" ဤအဆက်စပ်မှုအချက်များ၏နှုန်းထားများအဘယ်သူအားမျှ (ဆေးလိပ်သောက်အမှန်တကယ်ယုတ်လျော့ထားပါတယ်) ကိုပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်အတွင်းတိုးလာကြပါပြီ။ အမေရိကန်ရေတပ်စက္ကူမှ:
သို့သော် psychogenic ED ဘို့အကြံပြုအကျွမ်းတဝင်ဆက်စပ်အချက်များအဘယ်သူအားမျှနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်လျင်မြန်စွာအများအပြား-ခြံတိုးဘို့အကောင့်မှလုံလောက်သောပုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သုတေသီများမြင့်တက်နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများထိုကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်အဖြစ်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့လူနေမှု, (အချက်များသမိုင်းကြောင်းအအော်ဂဲနစ် ED ဆက်နွယ်နေကြောင်း) ၏ရလဒ်ဖြစ်ရပါမည်ကြောင်း hypothesize ။ သို့သျောလညျးထိုအလူနေမှုပုံစံစတဲ့အန္တရာယ်များကိုအချိုးကျပြောင်းလဲသွားတယ်ကြပြီမဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်ယုတ်လျော့ပါပြီ, နောက်ဆုံး 20 နှစ်များတွင်: 20-40 အသက်အမေရိကန်အမျိုးသားများတွင်အဝလွန်ခြင်းနှုန်းထားများ [4 နှင့် 1999 အကြားသာ 2008% တိုးလာ19]; အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအသက် 12 သို့မဟုတ်အထက်အကြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏နှုန်းထားများ [ပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်အတွင်းအတော်လေးတည်ငြိမ်ပါပြီ20]; နှင့်အမေရိကန်လူကြီးများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်နှုန်း [25 အတွက်% 1993 မှ 19 အတွက် 2011% မှငြင်းဆိုခဲ့သည်21].
"အတှကျအဖြစ်စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ထိုအဘယ်သူအားမျှ အကွောငျး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, သူတို့ကရိုးရိုး ED ဖို့ကိုအားနည်းစွာဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ တကယ်တော့အချို့လေ့လာမှုများစိတ်ဓာတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်လူနာရှိသည်သတင်းပို့ ပိုမိုမြင့်မား လိင်ဆန္ဒ အခြားလေ့လာမှုများကသိသာထင်ရှားသည်မှာစိတ်ကျရောဂါသည် ED ကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ED ရှိခြင်းသည်စိတ်ကျရောဂါစစ်ဆေးမှုကိုရမှတ်တိုးစေသည်။ ယူအက်စ်ရေတပ်စက္ကူမှ
အခွားသောစာရေးဆရာများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များတင်ပြသည်။ သို့သျောလညျး, ဘယ်လိုဖွယ်ရှိကြောင့်နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်မှုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါအကောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြားရှုပ်ထွေးကြားဆက်ဆံရေးပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သနည်း အခြားသူများကိုတိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသတင်းပို့စဉ်တချို့ကစိတ်ဓာတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်လူနာ [လိင်အဘို့လျော့နည်းဆန္ဒသတင်းပို့22, 23, 24, 25] ။ မသာစိတ်ကျရောဂါနှင့် ED ဖွယ်ရှိ bidirectional နှင့် Co-ဖြစ်ပေါ်အကြားဆက်ဆံရေးသည်လည်း [အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်26].
တစ်ချိန်ကယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲကရှင်းပြသည်ကြောင်းရိုးရာအချက်များလိင်အလုပ်မဖြစ်အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် 40 အောက်မှာယောက်ျားအတွက်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်အကောင့်မှမလုံလောက်သောပေါ်လာပါသည်။
2018 ၏နှစ်အောက် urology လူနာပေါ်မှာဤ 40 လေ့လာမှု (ED နှင့်အတူလူနာအရှင် Kris တေလာရဲ့အခိုင်အမာ debunking, ED မပါဘဲယောက်ျားထံမှကွာခြားမတွေ့ရှိရတစ်ဦးရီးရဲလ်-ဘဝက Cross-Section လေ့လာမှုလူငယ်အမျိုးသားများအတွက်-တွေ့ရှိချက်များထဲတွင် Erectile အလုပ်မဖြစ်သည်အချက်များ):
ယေဘုယျအား 229 (75%) နှင့် 78 (25%) လူနာပုံမှန်နှင့်ချို့ယွင်း Erectile ရာထူးအမည် (EF) ရှိခဲ့; ED နှင့်အတူလူနာအကြား, 90 (29%) ပြင်းထန် ED အကြံပြုထားတဲ့ IIEF-EF ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးနှင့်မရှိဘဲလူနာများ, ပျမ်းမျှအသက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သိသိသာသာသွေးတိုး, ယေဘုယျကျန်းမာရေးအခြေအနေ, ဆေးလိပ်သောက်သမိုင်း), အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပျမ်းမျှ IPSS ရမှတ်များပျံ့နှံ့နေသည်ဟု BMI ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ အလားတူပင်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုသွေးရည်ကြည်လိင်ဟော်မုန်းနှင့်အုပ်စုနှစ်စုအကြား lipid ပရိုဖိုင်းကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် ED နှင့်အတူလုလင်တို့သည်ပုံမှန် EF နဲ့နှိုင်းယှဉ်-အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုကနေအခြေခံလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွာခြားပေမယ့်ဆေးပညာ ED ၏တစ်ဦးထက်ပိုဖြစ်နိုင်ခြေ psychogenic အကြောင်းမရှိအကြံပြုခြင်း, နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရမှတ်ပုံဖော်မပြသသည်။
အချို့သောအကြောင်းများကြောင့် ED ရှိသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးခြင်း (porn နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသင့်သည်။ ) ထပ်ခါတလဲလဲ Kris Taylor သည်အခြား porn-induced ED deniers များကလူငယ်များ၏ ED သည်သက်ဆိုင်သောအလားတူစွန့်စားမှုအချက်များကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုငြင်းဆိုသည်။ အမျိုးသားများသည်အသက် ၄၀ ကျော်များတွင် ED ဖြစ်သည်။ ဤပြောဆိုချက်များသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေနှင့်မကိုက်ညီပါ။
နောက်ဆုံးတွင်တေလာ၏စက်ဘီးစီးခြင်းသည် ED နှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည် မကြာသေးမီက debunked ထားပြီး။ ဆောင်းပါးတစ်ဦးထံမှကောက်နုတ်ချက်:
အမေရိကန်စက်ရုံ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာကီဗင်မက်ဗာရီက“ စက်ဘီးစီးခြင်းသည်လူကြိုက်များလာခြင်းနှင့်ဝါသနာပါသည့်အားကစားတစ်ခုကဲ့သို့ပင်အားကစားတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းအများပြည်သူသိရန်အရေးကြီးသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အသင်း။
Kris တေလာကိုးကား (နှစ်ဦးစလုံးကျယ်ကျယ်အမေရိကန်ရေတပ်ပြန်လည်သုံးသပ်တှငျဆှေးနှေးခဲ့သညျ) နှစ်ခုစာတမ်းများ addressing
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုနောက်ပြန်လှည့်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုပြသခြင်းကိုဖော်ပြသည့်စာတမ်း ၅ ခုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြည့်စုံမှုနှင့်နှိုးဆွမှုနိမ့်ကျသောဆက်စပ်လေ့လာမှု ၂၂ ခုကိုလျစ်လျူရှုကာတေလာသည်“ အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သောသုတေသန” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံးသုတေသနသည်ဤအဆိုပြုချက်ကိုမထောက်ခံပါ။ ဥပမာ, တစ်ဦး 2015 Cross-Section အွန်လိုင်း လေ့လာချက် 3,948-Croatian, ဘှနှင့်ပေါ်တူဂီ၏ အဆိုပါထုတ်ဝေယောက်ျား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ် “ အများပြည်သူ၏စိုးရိမ်မှုများကိုထုတ်ဖေါ်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူငယ်များ၏အလိုဆန္ဒ၊ Erectile (သို့) အော်ဂဇင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်အန္တရာယ်အချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ” နောက်ထပ် 2015 လေ့လာချက်, 208 Non-ကုသမှုဤအချိန်အမေရိကန်ယောက်ျားရှာကြံ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်“ လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း၊ [ကြည့်ရှုခြင်း] ကိုပိုမိုကြည့်ရှုသူများ၌တုန့်ပြန်မှုများသည်ပိုမိုအားကောင်းသည်ဟုဖော်ပြထားသည်”
စက္ကူနှစ်မျိုးလုံးသည်အမှန်တကယ်လေ့လာမှုမဟုတ်သကဲ့သို့သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေများတွင်နှစ် ဦး စလုံးအားတရားဝင်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ စာနှစ်စောင်စလုံးသည် US Navy ၏စာပေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ငါစာတမ်းနှစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောစရာများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးခြားကဏ္createdများကိုငါဖန်တီးခဲ့သည်။ ငါတေလာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒုတိယစာတမ်းနဲ့စမယ်။ ငါတို့ပထမဆုံးအကြောင်းကြားခဲ့တယ် စာပေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။
စက္ကူ 2: ချီးကျူးခြင်း & Pfaus, 2015 ။
Kris တေလာကောက်နုတ်ချက်: နောက်ထပ် 2015 လေ့လာချက်, 208 Non-ကုသမှုဤအချိန်အမေရိကန်ယောက်ျားရှာကြံ ကြောင်းညွှန်ပြ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် [လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာရုပ်ပုံများ] ကိုကြည့်ရှုသူများ၌တုန့်ပြန်မှုများမှာပိုမိုအားကောင်းသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ဖွယ်မရှိချေ။.
ငါကိုအမေရိကန်ရေတပ်စက္ကူမှငါ့မှတ်ချက်များနှင့်ကောက်နှုတ်ချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရစ်ချတ် Isenberg, MD နဲ့တစ်ဦးအလွန်ကျယ်ပြန့် Lay ဝေဖန်မှုအားဖြင့်တရားဝင်ဝေဖန်မှုပေး:
စက္ကူကဲ့သို့တူညီသောဂျာနယ်များတွင်: ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD (2015) ကအယ်ဒီတာမှပေးစာ
အလွန်ကျယ်ပြန့် Lay ဝေဖန်မှု: အဘယ်အရာကိုမျှသံသယရှိလေ့လာမှုအတွက် Up ကိုထည့်: လူငယ်ဘဝတွင်စိတ်ကျအောကျခံ '' ED လက်ဝဲ Unexplained (2015)
အဆိုပါပြောဆိုချက်ကို: တေလာ၏စွပ်စွဲချက်နှင့် (Prause & Pfaus ပြောဆိုချက်အရ) ဆန့်ကျင်စွာပင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူအမျိုးသားများသည်“ အားကောင်းသည့်တုံ့ပြန်မှု” မရှိခဲ့ပါ။ စာတမ်း၏အခြေခံအုတ်မြစ် ၄ ခုအနက်တစ်ခုမှဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လိင်အင်္ဂါနှင့်လိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိပါ။ Prause & Pfaus ကသူတို့စက္ကူတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာမှာပိုမိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောအမျိုးသားများကသူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုသတ်မှတ်သည် porn ကြည့်နေစဉ်။ သော့ချက်ထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်ပါသည် porn ကြည့်နေစဉ် - တကယ့်လူတစ်ယောက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်မဟုတ်ပါ. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်နေစဉ်နှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုသောအခါလူတစ် ဦး ၏နှိုးဆွမှုသို့မဟုတ်စိုက်ထူမှုများအကြောင်းဘာမျှမပြောပါ။ ဒါဟာလုံလောက်စွာနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည့် porn- သွေးဆောင် ED အကြောင်းကိုဘာမျှမပြောထားသည် porn မသုံးဘဲ။ သို့သော် Prause & Pfaus မှ ၂၀၁၅ မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၎င်းတို့သည်ဘာသာရပ်များ၏နှိုးဆွမှုအဆင့်များကိုတိတိကျကျအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်
အငြင်းအခုံအတွက်၊ ပိုမိုကြည့်ရှုသောယောက်ျားများသည်အမျိုးသားများကသူတို့၏နိုးကြားမှုကိုနည်းနည်းကြည့်ရှုသူများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။ ဒီထက်ပိုပြီးတရား ၀ င်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးတဲ့အုပ်စုနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ porn သုံးစွဲဖို့မတရားသော။ ဒါဟာအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် ာင်း, (porn) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါ (ဦးနှောက်) ကို Activation နှင့်တဏှာ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ဖြစ်၏။ အသိ (cue-reactivity ကိုနှင့်မတရားသော) အဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှ ဦး နှောက်လေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုအကင်းပါးစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကလစ်များကိုတုန့်ပြန်မှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုထိန်းချုပ်သူများထက် ပို၍ မကြိုက်ခဲ့သော်လည်း sensitization သည်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသိသာထင်ရှားသည့်ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် Cambridge ဘာသာရပ်၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည် မိတ်ဖက်နှင့်အတူ arousal / erectile ပြဿနာများ ဒါပေမယ့်မရ porn နှင့်အတူ. အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုကနေ:
ရိုးရှင်းစွာထားပါ လေးလံသော porn အသုံးပြုသူပိုမိုမြင့်မားပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal (မတရားသော) သတင်းပို့သေးလည်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်သူသည် porn ကိုတုန့်ပြန်မှုသည်သူ၏“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု” သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့် erectile လုပ်ဆောင်မှုတို့၏သက်သေမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်အထိခိုက်မခံခြင်း၊ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24.
Prause & Pfaus 2015 ရဲ့နောက်ကွယ်ကအဖြစ်မှန် - ဒီဟာက ED နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာလုံးဝလေ့လာမှုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, Prause သူမ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုလေးခုမှအချက်အလက်များစုဆောင်းမိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်၊ Nicole Prause နှင့် Jim Pfaus တို့၏ဤစာတမ်းသည် peer-review လွန်သွားခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်မှာသူတို့၏စာတမ်းပါအချက်အလက်များသည်အခြေခံကျသောလေ့လာမှု ၄ ခုမှအချက်အလက်များနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကှာဟအသေးစားကွာဟချက်မဟုတ်, plugged မရနိုငျသောအပေါက်တွင်း။ ထို့အပြင်စာရွက်တွင်မူရင်းအတိုင်းမှားယွင်းသောသို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏ထောက်ခံမှုမရသည့်ပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မမှန်သောတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူစတင် နီကိုးလ် Prause & ဂျင်မ် Pfaus ။ ဒီလေ့လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာနယ်လစ်အများအပြားရဲ့ဆောင်းပါးတွေကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုခဲ့သည် ပိုကောင်း စိုက်ထူ, သေးသောစက္ကူကိုတွေ့သောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်တမ်းတင်အင်တာဗျူးမှာတော့နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နှစ်ဦးစလုံးမဟုတ်မမှန်သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစိုက်ထူတိုင်းတာခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်နှင့် porn ကိုသုံးသူယောက်ျားပိုကောင်းစိုက်ထူခဲ့။ ထဲမှာ ဂျင်မ် Pfaus တီဗီအင်တာဗျူး Pfaus ကဤသို့ဆို၏:
In ဒီရေဒီယိုအင်တာဗျူး နီကိုးလ် Prause စိုက်ထူသည့်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ပြပွဲကနေအတိအကျကိုးကား:
လူတွေကများသောအားဖြင့်အိမ်မှာ erotica ကိုကြည့်လေလေ၊ သူတို့မှာဓာတ်ခွဲခန်းမှာပိုမိုအားကောင်းတဲ့တုန့်ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုများလေလေ၊
သို့သျောလညျးဤစာတမ်းတွင်အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းသို့မဟုတ်စိုက်ထူအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဘူး "စိုက်ထူ၏မြန်နှုန်း။ " သာအဆိုပါစက္ကူ ပြောဆိုထားသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုခေတ္တကြည့်ရှုပြီးနောက်သူတို့၏“ နှိုးဆွမှု” ကိုယောက်ျားများအားမေးမြန်းရန် (၎င်းစာတမ်းများမှဘာသာရပ်အားလုံးအပေါ်မေးမြန်းခြင်းကိုစာတမ်းများမှမရှင်းလင်းပါ) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စာရွက်မှကောက်နုတ်ချက်သည် -
အမျိုးသားများ၏ကိုယ်တိုင်တင်ပြသောအတွေ့အကြုံကိုထောက်ခံရန်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာလိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုအချက်အလက်များမပါ ၀ င်ပါ။
တစ်စက္ကန့်ကလက်ခံပြောဆိုချက်ကို, ခဲရေးသားသူနီကိုးလ် Prause အတွက် Tweet ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လေ့လာမှုအကြောင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, 280 ဘာသာရပ်များပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြကြောင်းကိုသိနှင့်သောသူတို့သည်ခဲ့ "အိမ်မှာအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ။ " သို့သော်လေးပါးအခြေခံလေ့လာမှုများသာ 234 အထီးဘာသာရပ်များပါရှိသောဒါကြောင့် "280" လမ်းပိတ်ထားသည်။
တတိယကလက်ခံပြောဆိုချက်ကို: အအယ်ဒီတာဖို့အရေးပါပေးစာ၏အာဘော်အထက်ပါချိတ်ဆက်ဒေါက်တာ Isenberg, ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အံ့ဩ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' နှိုးဆွအဆင့်ဆင့်လာသောအခါသုံးနှိုင်းယှဉ်ကြပါပြီ 2015 ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများအတွက်4အခြေခံလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများတစ်3မိနစ်ရုပ်ရှင်, တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ခု 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာမြဲမြံစွာတည်င့် ရုပ်ရှင် ပို. arousal ဓာတ်ပုံများထက်များမှာထို့ကြောင့်မည်သည့်တရားဝင်သုတေသနအဖွဲ့ကမျှထိုတုန့်ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်ဤဘာသာရပ်များကိုအတူတကွစုစည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကသူတို့ရဲ့စက္ကူ Prause & Pfaus မှာလေ့လာချက် ၄ ခုစလုံးကလိင်ရုပ်ရှင်တွေကိုသုံးခဲ့တယ်လို့မရေရာပါဘူး။
"ဟုအဆိုပါလေ့လာမှုများအတွက်တင်ပြအဆိုပါ VSS အားလုံးရုပ်ရှင်ကြတယ်။ "
Prause ၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုများတွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဤဖော်ပြချက်သည်မှားသည်။ ဤသည် Prause & Pfaus သူတို့ရဲ့စက္ကူအကဲဖြတ်ကြောင်းတောင်းဆိုလို့မရပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြောင်းပြချက် "နှိုးဆော်သံ။ " ဘာသာရပ်အားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်လူတစ် ဦး စီအတွက်တူညီသောနှိုးဆွမှုကိုသင်အသုံးပြုရမည်။
တစ်ဦးကစတုတ္ထမထောက်ပံ့ပြောဆိုချက်ကို: ဒေါက်တာ Isenberg လည်းဘယ်လိုမေးလျှင်, ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 သည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' arousal အဆင့်ဆင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင် သာ 1 တစ်အသုံးပြုသော4အခြေခံလေ့လာမှု 1 စကေးမှ9။ တစ်ခုက ၀ မှ ၇ စကေးကိုသုံးတယ်၊ တစ်ခုက ၁ မှ ၇ စကေးကိုသုံးတယ်၊ လေ့လာမှုတစ်ခုကလိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမဖော်ပြဘူး။ Prause & Pfaus သည်ထပ်မံရှင်းပြ။ မရနိုင်ပါ။
အလွန်အမင်း "1 ဖို့" မှာအားလုံး "9 ကနေအထိ" လိင်စိတ်နိုးထမဟုတ် "လူဟာသူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုညွှန်ပြရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်" ။ "
နောက်ခံစာတမ်းများအရဤအချက်သည်မှားသည်။ ဤသည် Prause & Pfaus သည်သူတို့၏စာတမ်းသည်အမျိုးသားများအတွက်“ နှိုးဆွခြင်း” အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအကဲဖြတ်သည်ဟုမပြောနိုင်သည့်ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်တစ်ခု၏ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်လေ့လာမှုတစ်ခုသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တူညီသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုရမည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ Prause ထုတ်လုပ်သည့်ခေါင်းစီးများ၊
ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 လည်းသူတို့ erectile လည်ပတ်ရမှတ်များနှင့်ပြီးခဲ့သည့်လ၌ကြည့်ရှုအားပေး porn ၏ပမာဏအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ပြောဆိုထားသည်။ ဒေါက်တာ Isenberg ထောက်ပြအဖြစ်:
"ပို။ ပင်စိတ်ပျက်စရာ erectile function ကိုရလဒ်ကိုတိုင်းတာဘို့စာရင်းအင်းတွေ့ရှိချက်များစုစုပေါင်းပျက်ကွက်သည်။ မည်သည့်အချက်အလက်မျှထောက်ပံ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ စာဖတ်သူများသည်နာရီနှင့်ချီ။ ကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် erectile လုပ်ဆောင်မှုတို့အကြားဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းသူတို့၏ခိုင်မာသောခိုင်လုံသောဖော်ပြချက်ကိုယုံကြည်ရန်စာရေးသူမှစာဖတ်သူကိုတောင်းဆိုသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လက်တွဲဖော်နှင့် erectile လုပ်ဆောင်မှုကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်စေနိုင်သည်ဟုစာရေးသူများ၏ပconflictိပက္ခဖြစ်သည့်အခိုင်အမာအရစာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမရှိခြင်းသည်အလွန်ကွာခြားသည်။
Dr. Isenberg ၏ဝေဖန်မှုကို Prause & Pfaus ၏တုန့်ပြန်မှုအရ ၄ င်းတို့သည်“ ခိုင်မာသောခိုင်လုံသောဖော်ပြချက်” ကိုအထောက်အပံ့ပေးရန်အချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာထပ်မံမပေးခဲ့ပါ။ အဖြစ် ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစာရွက်စာတမ်းများ, Prause & Pfaus တုန့်ပြန်ချက်သည်ဒေါက်တာ Isenberg ၏တရားဝင်စိုးရိမ်မှုများကိုရှောင်ရှားရုံမကများစွာပါ ၀ င်သည် အသစ် မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်အတော်ကြာလင်းမြင်သာမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စာပေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် အပေါ် commented ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015:
“ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်စာတမ်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်လူငယ်များအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများသည်ဤစာတမ်းများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တရားဝင်တရားဝင်ဝေဖန်မှုများတွင်စောလွန်းနေပုံရသည်။ ပထမဆုံးစက္ကူသည်ငယ်ရွယ်သော ED တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်စေသောဖြစ်နိုင်ခြေအခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ အသုံး ၀ င်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပါရှိသည်50] ။ သို့သော်ဤစာအုပျအမျိုးမျိုးသောကှာဟ, ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုအဘို့အဝေဖန်မှုအောက်မှာရောက်လေပြီ။ ဥပမာ, အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက် erectile function ကိုရလဒ်ကိုအတိုင်းအတာအဘို့အဘယ်သူမျှမစာရင်းအင်းရလဒ်များကိုပေးပါသည်။ သုတေသနသမားစက္ကူ၏တရားဝင်ဝေဖန်မှုထွက်ထောက်ပြအဖြစ်ထပ်မံသည်, စာတမ်းများ '' စာရေးဆရာ, "သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်အပြစ်လွတ်စေကိုလေ့လာလူဦးရေဒါမှမဟုတ်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူစာဖတ်သူကိုပေးကြပြီမဟုတ်"  ။ ထို့အပြင်အဆိုပါသုတေသီများသည်လွန်ခဲ့သောလကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာနာရီစုံစမ်းစစ်ဆေး။ သို့သျောလညျးတစျယောကျတညျးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနာရီကြာ၏ variable ကို "နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပြဿနာများ", အ SAST-R ကို (စမ်းသပ်ပြလိင်စွဲလမ်း) တွင်ရမှတ်များ, နှင့် IATsex အပေါ်ရမှတ် (အနေနဲ့တူရိယာမှကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်လေ့လာမှုများတွေ့ပြီ ကြောင်း [) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှစွဲအကဲဖြတ်ထားပါသည်52, 53, 54, 55, 56] ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း (cue reactivity ကို), အားလုံးစှဲအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုထူထောင် Correlate ကြည့်နေစဉ်တစ်ဦးကပိုကောင်းခန့်မှန်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings ဖြစ်ပါတယ် [52, 53, 54] ။ အင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုစွဲလမ်းအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူးကြောင်းတိုးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ [ "ရှယျခကျြ, အကျိုးဆက်များနှင့်အပြုအမူ၏ Contextual ဝိသေသလက္ခဏာများလည်းအကဲဖြတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင်စွဲလမ်းမှုသာစနစ်တကျအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်"57] ။ (အသုံးပြုမှုနာရီထက်အခြား) "hypersexuality" အတွက်အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားသုံးသုတေသနအဖွဲ့များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းရှိသည်ဟု [15, 30, 31] ။ အတူတူယူကြ, ဒီသုတေသနအကြံပြုချက် "အသုံးပြုမှုနာရီ" ထက်, အမျိုးမျိုးသော variable တွေကိုညစ်ညမ်းစွဲ / hypersexuality ၏အကဲဖြတ်အတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာများနှင့်လည်းညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအကဲဖြတ်အတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ယူအက်စ်ရေတပ်စက္ကူက“ ညစ်ညမ်းစေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အတွက်“ လက်ရှိအသုံးပြုနေသောနာရီများ” ကိုသာဆက်စပ်မှုမှာအားနည်းချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။ လက်ရှိကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းပမာဏသည်ညစ်ညမ်းသော ED ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် -
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှိုင်းယှဉ် porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အချိုးအစား
ပူးပေါင်းလိင်အတွက်ကွာဟချက် (တဦးတည်းသာ porn အပေါ်မှီခိုရှိရာ)
အသက်အရွယ် porn ကို အသုံးပြု. စတင်
(porn သစ်အမျိုးအစားများမှမြင့်တက်ထံမှ) porn-သွေးဆောင် fetishes ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
session တစ်ခုနှုန်းအသစ်အဆန်း၏အဆင့် (ဆိုလိုသည်မှာစုစည်းဗီဒီယိုများ, မျိုးစုံ tabs များ)
hypersexuality / ညစ်ညမ်းစွဲ၏ရောက်ရှိခြင်း
ဒီဖြစ်စဉ်သုတေသနပြုဖို့ပိုကောင်းလမ်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရေတပ်စက္ကူနှင့်နှစ်ခုသည်အခြားလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ရလဒ်, စောငျ့ရှောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသုတေသနထုတ်ဖော်ပြသ causation အစားအနက်ကိုအမျိုးမျိုးဖွင့် fuzzy ဆက်စပ်မှု၏။ အကြှနျုပျ၏ site ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် porn ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့သူတထောင်အနည်းငယ်ယောက်ျား။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Co-စာရေးဆရာ နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်တော်မူပြီးမှ, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှုများမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်လူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes # 12 အတူတူ, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, Gabe # 4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
စက္ကူ 1: Landripet & Stulhofer, 2015 ။
Kris တေလာကောက်နုတ်ချက်: ဥပမာ, တစ်ဦး 2015 Cross-Section အွန်လိုင်း လေ့လာချက် 3,948-Croatian, ဘှနှင့်ပေါ်တူဂီ၏ လိင်မှုဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြသောအမျိုးသားများက“အများပြည်သူ၏စိုးရိမ်မှုများကိုပေါ်ပေါက်စေသည့်အရာများနှင့်ဆန့်ကျင်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများ၏အလိုဆန္ဒ၊။ "
Landripet & Stulhofer, ၂၀၁၅ ကိုဂျာနယ်မှဆက်သွယ်မှုအတိုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစာရေးသူနှစ် ဦး သည်အခြားသက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ (နောက်ပိုင်းတွင်) ချန်လှပ်စဉ်ဝေမျှရန်အချက်အလက်အချို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Prause & Pfaus ကဲ့သို့ဂျာနယ်သည် Landripet & Sulhofer ကိုဝေဖန်မှုများထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အပေါ်မှတ်ချက်: Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Is? Gert မာတင် Hald, Ph.D အားဖြင့်
သောအရေးဆိုမှုအဖြစ် Landripet & Štulhofer, 2015 porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကြားမျှဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ် ဒီ YBOP ဝေဖန်မှု နှင့် စာပေဒကိုအမေရိကန်ရေတပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ထို့အပြင် Landripet & Stulhofer ၏စက္ကူကသူတို့တင်ပြသောသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုသုံးခုကိုချန်လှပ်ထားသည် ဥရောပညီလာခံ (ပိုမိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) စာရွက်စာတမ်းမှစာပိုဒ်သုံးပိုဒ်၏ပထမနှင့်စတင်ကြပါစို့ Landripet & Štulhofer, 2015:
တစ်ဦးကစက္ကန့်စက္ကူနော်ဝေး, ပေါ်တူဂီများနှင့်ခရိုအေးရှားကနေလိင်တက်ကြွယောက်ျားအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ပညာရေးနှုန်းထားများအကြားအနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံ  ။ အသီးသီး 40% နှင့် 31% အဖြစ် ED နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှုန်းထားများအဖြစ်မြင့်မားသောတွေ့ရှိခဲ့အမှန်ပင်ယခင်စာရွက်သူများ, ယောက်ျား 37 နှင့်အောက်တွင် ED ၏မြင့်ပျံ့နှံ့အသိအမှတျပွုနှင့်မတူဘဲဤစာရေးဆရာများ။ ဆနျ့ကငျြ, စက္ကူရဲ့စာရေးဆရာတဦးအားဖြင့် 2004 ၌ပြစ်မှားမိ Pre-streaming ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုတေသန [ယောက်ျား 5.8-35 သာ 39% ၏ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြ58] ။ သို့သျောလညျး, တစ်ဦးစာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်စာရေးဆရာများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနုပျို ED များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်မထင်ထားဘူးကြောင်းကောက်ချက်ချ။ ဒါကသူတို့စစ်တမ်းကောက်ယူပျေါတူဂီယောက်ျားနော်ဝေနှင့် Croatian နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နိမ့်ဆုံးနှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ပေါ်တူဂီသာ 40% ကိုနော်ဝေနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက "နေ့စဉ်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်ကနေ" အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးပြီးအစီရင်ခံကြောင်းပေးထား, အလွန်အမင်းပြတ်သားပုံရသည် , 57% နှင့် Croatian, 59% ။ ဤစာတမ်းသည်တရားဝင် [အလုပ်မှာဖြစ်လူသိများသို့မဟုတ်တွေးဆ variable တွေကိုအကြားတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်ဦးစလုံးဆက်ဆံရေးပတ်ဝိုင်းနိုင်ပြည့်စုံမော်ဒယ်များ employ ပျက်ကွက်မှုအတွက်ဝေဖန်ထားသည်59] ။ စကားမစပ်, ပြဿနာအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်တစ်ဦးဆက်စပ်စာရွက်ထဲမှာ တူညီသောစစ်တမ်းသင်တန်းသားများကိုအများအပြားပါဝင်သော ပေါ်တူဂီ, ခရိုအေးရှားနှင့်နော်ဝေကနေလူတို့သညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကသူတို့ပြဿနာမရှိခြင်းလှူဒါန်းခဲ့သူတို့ယုံကြည်သည်မြောက်မြားစွာအချက်တွေထဲကအရာဟုမေးခဲ့သည်။ သည်အခြားအကြောင်းရင်းများအနက်မှန်းခြေ 11% -22% [ "ငါသိပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်" နှင့် 16% -26% "ငါအရမ်းမကြာခဏ masturbate" ကို ရွေးချယ်. ရှေးခယျြခဲ့60]
ငါနှင့်ရေတပ်ဆရာဝန်များဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤစာတမ်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် - ပေါ်တူဂီအမျိုးသား ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ညစ်ညမ်းမှုကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြပြီးနော်ဝေလူမျိုး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် porn ကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ပေါ်တူဂီအမျိုးသားများသည်နော်ဝေလူမျိုးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြည့်စုံမှုနည်းပါးသည်။ Croats လေးစားမှုနှင့်အတူ Landripet & Štulhofer, 2015 ပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပညာရေးအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ဝန်ခံပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်ဤပြောဆိုချက်ကိုလိမ္မာစာရငျးအငျးပညာသည်နှင့်များစွာသောလေ့လာမှုတွေရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးက MD အဆိုအရလှည့်စားစေခြင်းငှါ:
ကွဲပြားသောနည်းလမ်း (Chi Squared) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း…အလယ်အလတ်အသုံးပြုခြင်း (ခုံသမာဓိဖြင့်အသုံးပြုခြင်း vs. ) သည်ဤခရိုအေးရှားလူ ဦး ရေတွင် ED ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ED ရှိခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဒါဟာတွေ့ရှိချက် Croats အကြားသာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်စပ်စုသည်ပေမယ့်ဒါဟာငါ့အဘို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအသံ။
ဖြည့်စွက်ကာ, Landripet & Stulhofer 2015 စာရေးသူတစ်ဦးမှတင်ပြရာသုံးသိသိသာသာဆက်စပ်, ချန်လှပ် ဥရောပညီလာခံ။ သူက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်သက်ခြင်းတို့အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
"တိကျတဲ့ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများများအတွက် preference ကိုအစီရင်ခံသိသိသာသာ erectile နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (သို့သော် ejaculatory သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ-related မဟုတ်) အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ "
အဲဒါပြောနေတာပါ Landripet & Stulhofer သူတို့ရဲ့စက္ကူကနေညစ်ညမ်း၏တိကျသောအမျိုးအစားများများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဦးစားပေးအကြားကဒီသိသာဆက်စပ်မှုချန်လှပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ porn အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏မူလလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမကိုက်ညီပါဘူး, ဤအေးစက် porn ဦးစားပေးမှန်ကန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမကိုက်ညီပါဘူးတဲ့အခါမှာပညာရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အမျိုးအစားများသို့မြင့်လာရန်အဘို့အဒါဟာအတော်လေးဘုံပါပဲ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းပြီးခဲ့သည့်လသို့မဟုတ်အကြိမ်ရေထဲမှာမယ့်နာရီ - ငါတို့သည်အထက်ထောက်ပြကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆက်စပ်မျိုးစုံ variable တွေကိုအကဲဖြတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အားဖြင့်ချန်လှပ်ဒုတိယအရေးပါသောတွေ့ရှိချက် Landripet & Stulhofer 2015 အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများပါဝင်ပတ်သက်:
လိင်မှုကိစ္စပြတ်လပ်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းတို့ကြောင့်သိသာသောဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်မကျင့် Landripet & Stulhofer ၂၀၁၅ ခုနှစ်အစီရင်ခံစာအရသူတို့သည်အမျိုးသမီးများ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်အမျိုးသားအနည်းငယ်တို့အကြားသိသာသောဆက်နွယ်မှုများတွေ့ရှိခဲ့သလား။ အဘယ်ကြောင့်ဒီတွေ့ရှိချက်မဆိုအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြမထားပါဘူး Stulhofer ရဲ့လေ့လာမှုများစွာ ဤအတူညီဒေတာအစုံမှပေါ်ပေါက်? မိမိအသင်းသူတို့ porn-သွေးဆောင် ED debunks ဖြစ်သော်လည်း, porn အသုံးပြုမှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖုံးကွယ်အကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကြားရန်အလွန်နှေးကွေးတောင်းဆိုဒေတာထုတ်ဝေရန်အလွန်လျင်မြန်ပုံရသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒိန်းမတ် porn သုတေသီ Gert Martin Hald ၏တရားဝင်ဝေဖန်ချက်များ ပြီးခဲ့သည့် 12 လအတွင်းတစ်ပတ်ကိုရုံကြိမ်နှုန်းထက်ပိုမို variable တွေကို (ပြုပြီ, မော်ဒ) အကဲဖြတ်ရန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသံယောင်:
"ဒီလေ့လာမှုဖြစ်နိုင်သောမော်ဒယ်သို့မဟုတ်လေ့လာခဲ့ဆက်ဆံရေး၏ဖျန်ဖြေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမထားလည်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဘူး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနပြုမှုများတွင်လေ့လာမှုပြုခဲ့သည့်ဆက်ဆံရေး၏ပြင်းအားသို့မဟုတ် ဦး တည်ချက် (ဆိုလိုသည်မှာအလယ်အလတ်) အပေါ်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သောအချက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ဆိုလိုသည်၊ ဖျန်ဖြေသူ) အပေါ်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သောအချက်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ထိုကဲ့သို့သောအာရုံစိုက်မှုများပါ ၀ င်သည်။
အဓိကအချက် - ရှုပ်ထွေးသောဆေးကုသမှုအခြေအနေများအားလုံးသည်အချက်များများစွာပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ဝေးဝေးရောက်သောကြေညာချက်များနှင့်မသင့်လျော်ပါ။ Landripet & Stulhofer's ကြေငြာချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများ၏အလိုဆန္ဒ၊အသုံးပြုသူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အခြားညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းကြောင့်အလွန်ဝေးကွာသွားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ Landripet & Stulhofer၊ ၂၀၁၅ ဆွေးနွေးခြင်းတွင်စာပိုဒ် ၂ နှင့် ၃ ကိုဖတ်ပါ။
တနည်းကား, ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှုများအရှိဆုံးမှတ်သားစရာများပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဆက်စပ်လေ့လာမှုများမှလေးစားမှုနှင့်အတူပြုလုပ် variable တွေကိုတစ်ရှုပ်ထွေး set ကိုမကြုံစဖူးနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်အလုပ်မှာအန္တရာယ်အချက်များ elucidate နိုင်ရန်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့လိုဖွယ်ရှိသည်။ ပထမဦးစွာကနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဖြစ်စေခြင်းငှါ, အခက်အခဲတစ်ခုမိတ်ဖက်များနှင့် erectile ပြဿနာများနှင့်အတူ orgasming အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း-related သက်ရောက်မှု၏တူညီသောရောင်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအလားအလာ illuminating ဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါဤအအခက်အခဲများအပေါငျးတို့သပေါင်းစပ်သင့်ကြောင်း။
ဒုတိယအချက်မှာကအတိအကျပေးသောပေါင်းစပ်အချက်များ၏အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် variable တွေကိုညစ်ညမ်း-ကူညီညစ်ညမ်း-အခမဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှိုင်းယှဉ်၏အနှစ် (1) တို့ပါဝင်သည်မယ်ကတိပေး, ထိုကဲ့သို့သောအခက်အခဲများကိုအကောင်းဆုံးအကောင့် may မသိရသေးပေမယ့်; အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းနှင့်အတူသုက်တစ်ဖက်နှင့်အတူသုက်၏ (2) အချိုး; (3) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ / hypersexuality ၏ရှေ့မှောက်တွင်; (4) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု streaming ၏နှစ်ပေါင်းအရေအတွက်ကို; (5) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုစတင်ကကြိုတင်အပျိုဖော်ဝင်မှစတင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိအဘယျသို့နှစ်အရွယ်တွင်; တိုးပွားလာသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (6) လမ်းကြောင်းသစ်; (7) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပိုမိုလွန်ကဲအမျိုးအစားများမှတင်းမာမှု, ဒါကြောင့်ထွက်။
ခင်မှာစိတ်ချလက်ချကျနော်တို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထံမှစိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ဘာမျှမရှိသည်ဟုဆိုကာ, သုတေသီများနေဆဲအလွန်မကြာသေးမီများအတွက်အကောင့်ရန်လိုအပ်ပါတယ် နုပျို ED နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာ, ပြီးနောက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်အများအပြားလေ့လာမှုများ.
Kris တေလာမှ resorts ကြော်ငြာ hominem နှင့်မှားယွင်းစွာတင်ပြ။ ငါတုံ့ပြန်ကြသည်။
Kris တေလာ: သူမ၏အရင်းအမြစ်ဤ စက္ကူ, အလှည့်အတွက်ရင်းမြစ်ထားတဲ့ဂဏန်းပေးသော နှစ် စာတမ်းများ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုအကြောင်းတရားဟုမရည်ညွှန်းပါ။ စက္ကူ၏ဒုတိယစာရေးသူကြောင်းဖော်ပြခြင်းမ ဂယ်ရီ Wilson က, တစ်ဦးလူသိများတဲ့အားကြီးသော Anti-ညစ်ညမ်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်။
ငါတေလာရဲ့လျစ်လျူရှုသွားခဲ့သည် ကြော်ငြာ hominem တိုက်ခိုက်မှု, ဒါပေမယ့်အထက်ပါနှစ်ခုစာကြောင်းများသည်သူ၏နည်းဗျူဟာများနှင့်ဘက်လိုက်မှုဖော်ထုတ်။ ဒုတိယကြိုးစားမှုငါ့ကို mislabeling ကပယ်ချဖို့အနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးဝါကျသည်စာပေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်များ၏ content ဂေါ် "ဟုအားကြီးသော Anti-ညစ်ညမ်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်။ "
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အစောပိုင်းကငါ၏အ Co-စာရေးဆရာများသူတို့ကို7စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်,2ဆီးရောဂါပါရဂူများနှင့်ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းကနေမှ neuroscience အတွက်ပါရဂူဘွဲ့နဲ့ MD တို့2အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်တွေလည်းပါဝင်သည်။ အကြှနျုပျ၏ Co-စာရေးဆရာများ (အဓိကအားဖြင့်) လူပျိုတို့ကုသ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုအများကြီးကုန်ရပြီ။ အဆိုပါစက္ကူ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်တီထွင်ခဲ့သူစစ်မှုထမ်းများ၏3လက်တွေ့အမှုအစီရင်ခံစာများ, ပေးခဲ့သည်။ တေလာအစဉ်အဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်များအတွက်လူနာသည်မြင်ဘူးသနည်း သူကအစဉ်အဆက်တစ်ဆေးစစ်ဖျော်ဖြေခဲ့သလဲ ဒါဟာတေလာရဲ့ရည်မှန်းချက်ကရေးသားခဲ့သူဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ, စက္ကူကိုလျစ်လျူရှုရန်သူ၏စာဖတ်သူအားပေးနှင့်ရုံစက္ကူရဲ့အကြောင်းအရာနှင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အဘို့သူ၏စကားမယူခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။
တေလာကငါ့ကို“ ထက်ထက်သန်သန်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ” လို့တံဆိပ်ကပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့အင်တာဗျူးအမျိုးမျိုးမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ www.yourbrainonporn ကိုဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ ငါ့ကို 2016 အင်တာဗျူး နောဧသည်ခဘုရားကျောင်းအားဖြင့်။ ) ဆိုက်ရဲ့အပေါ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စာမကျြနှာ "အကြောင်း"ငါ (ငါ့အမိဘများနှင့်အဘိုးအဘွားခဲ့ကြသည်ကဲ့သို့) ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်ကြောင်းကို၎င်း, ငါ့နိုင်ငံရေးကိုများမှာ လစ်ဘရယ်ဝေး-left။ ငါ porn မအမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်: ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အမျိုးအစားထဲမှာ fluke မှတဆင့်, (မကြာမီ streaming များပြွန် porn ၏ထွန်းပြီးနောက်) 2007 ပတ်လည်ကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်များအတွက် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်လိင်စိတ်၏စောဒကယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်းကျင်ဆွေးနွေးမှုများဖန်တီးကြှနျုပျ၏မယားမဟုတ်ဘဲထင်ရှားတဲ့ဖိုရမ်ပေါ်မှာတင်စတင်ခဲ့သည် ဆက်ဆံရေး။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်ကျော်ကြောင်းဖိုရမ်တစ်ခုမှာများစွာသောမဟုတ်ရင်ကျန်းမာယောက်ျား porn တက်ပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။ ဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့သညျထောကျအကူပွုသူတို့ရဲ့ရွယ်တူ '' အတွေ့အကြုံများကိုဖတ်ရှုခြင်းတွေ့ရှိခဲ့သောကွောငျ့နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ blogged ။ မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ဖိုရမ်သူတို့ရဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏မျှော်လင့်မထားတဲ့သက်ရောက်မှုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းငှါရှာကြံအတော်လေးလုလင်တို့နှင့်အတူလျှံခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖြစ်စဉ်သို့ကြည့်ဖို့ပညာသင်နှစ် sexologists ဟုမေးပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရေတွက်လို့မရပါဘူး။ သူတို့ကငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါဝမ်းနည်းစရာ, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ခံစားနေရပြီးလူတို့သညျအများတို့သည်လည်းသူတို့အသက်အဘို့ကျိုးပဲ့ခဲ့ကြောက်ရွံ့သတ်သေခဲ့သညျ။ အဆိုပါခံစားနေရသူ '' အခွအေနစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသင့်ပါတယ်သူကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ဆက်လက် stonewalling ၏မျက်နှာကိုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးလိုအပ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (တစ်အကွာအဝေးကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်သူယောက်ျား၏ပုံပြင်များပေးအပ်ကြောင်းရရှိနိုင်မယ့်ဆိုက်ဘာစပေ့စေခံစားခဲ့ရ အထူးသဖြင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ခဏသို့မဟုတ်စိတ်မချရစိုက်ထူ) ။ Www.yourbrainonporn.com မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒါဟာဘာမှအဘို့လှုံ့ဆော်ပါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိမ့်မည်။
မယ်ဆိုတာတေလာရဲ့ပါမောက္ခကသူ့နည်းဗျူဟာ၏အတည်ပြု? သူတို့က, သူသည်မိမိကျူရှင်အပေါ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲထားပြီးမယ်ဆိုရင်။